February 2013 – Zimbabwe Daily
Continue Reading Temba Mliswa denied bail again
Fraudster ran US$54 000 bill on behalf of Mutumwa Mawere’s ‘party’
ZIMBABWE - A SUSPECTED serial fraudster allegedly posed as businessman Mutumwa Mawere’s personal assistant before hiring six vehicles from a local car rental company using the businessman’s name. Thandiwe Dube…
Continue Reading Fraudster ran US$54 000 bill on behalf of Mutumwa Mawere’s ‘party’
HARARE - Prime Minister Morgan Tsvangirai has received another honorary doctorate degree from the Sun Moon University in South Korea, in recognition of his efforts towards attaining peace and democracy…
Continue Reading Tsvangirai conferred with another honorary doctorate
Grace to build Amai Mugabe University in Mazowe
ZIMBABWE - VISITING Ras Al Khaimah ruler Sheikh Saud Bin Saqr Al Qasimi has expressed interest in pursuing various business opportunities here. He is in Zimbabwe on a four-day State…
Continue Reading Grace to build Amai Mugabe University in Mazowe
Mutasa insists Christpowers’ father is ZANU-PF
HARARE - SLAIN Christpower Maisiri was born in Radze Mountain in 2000 as his parents hid from marauding shock-troops loyal to President Robert Mugabe’s Zanu PF. On Saturday night, he…
Continue Reading Mutasa insists Christpowers’ father is ZANU-PF
ZIMBABWE - Zanu- PF has dismissed as baseless, offensive and malicious allegations by MDC-T that the party was responsible for the untimely death of Christpower. Police have summoned forensic scientists…
Continue Reading ZANU-PF says allegations of involvement in Christpowers’ death offensive
Shingisai breaks down in admiration of Mugabe
ZIMBABWE - PRESIDENT Mugabe last Thursday said God had charged him to serve Zimbabwe and pledged to carry on the “divine task” without backtracking. Mugabe made the remark at State House at…
Continue Reading Shingisai breaks down in admiration of Mugabe
Vapostori vow to vote for Mugabe
ZIMBABWE - Apostolic and other African-initiated churches have vowed to mobilise millions of people to vote for Zanu PF in the forthcoming general elections. The churches’ political stance comes amid…
Continue Reading Vapostori vow to vote for Mugabe
ZIMBABWE - A NUMBER of MDC-T members in the Diaspora have submitted their curriculum vitae and applications to contest in the forthcoming elections, angering sitting MPs and local aspiring candidates…
Continue Reading MDC will not stop Diaspora members from representing party in elections
Continue Reading De-Mbare thrashes Bosso to win Bob at 89 Super Cup